Linus Torvalds ayaa mar kale ku qarxay liisaska dirista, markan waxa uu la jiray tallaalka ka-hortagga | Laga soo bilaabo Linux
Linus Torvalds waa abuuraha Linux shaki la'aan mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan adduunka ee isha furan oo waxaa xusid mudan in tani aysan isaga siin sumcadda uu leeyahay laakiin ay sidoo kale la sudhan tahay jinni oo aad u culus jidka, tan iyo marar kala duwan ayuu soo kala dhex galay khilaaf aad u badan labadaba horumariyeyaasha kernel, iyo sidoo kale wadamo badan (sida noocaas oo kale ah Nvidia).
Taxanahan isku dhaca ah ugu qalmay isaga mar hore inuu shaaciyo inuu si ku meel gaar ah isaga casilay booskiisa sida isuduwaha horumarinta kernel ee Linux (sanadka 2018), maadaama joojinta horumarku ay ahayd hamiga ah in dib looga fakaro doorkooda bulshada ayna helaan waqti ay ku bartaan arrimaha la xiriira fahamka shucuurta dadka iyo ka jawaab celinta ku haboon xaaladaha isku dhaca.
Waa inaan tixgelin siino taas Linus sidoo kale, waa qof sidaas oo kale waan qaldami karnaa sidoo kale waa sax in raaligelin la bixiyo Markaa waxay ahayd maxaa yeelay wuxuu ka cudurdaartay inuu mararka qaar dhexgalo isla markaana uu si aad ah ugu jawaabo khaladaadka iyo khaladaadka dadka kale.
Fikradahan waxaa kiciyay Linus qaladkiisa iyo falcelinta bulshada ee qaladkan.
Linus wuxuu khalday goobta iyo waqtiga la qabanayo shirkii Oktoobar Linux Kernel Maintainer wuxuuna qorsheeyey inuu fasax la qaato qoyskiisa inta lagu jiro waqtigan. Linus wuxuu ku yaboohay inuu martigeliyo shirweynaha isaga la'aantiis, laakiin qabanqaabiyeyaashu waxay geliyeen booska Linus waxayna u codeeyeen in laga wareejiyo dhacdada Vancouver loona wareejiyo Edinburgh si uu uga soo qayb galo shirwaynaha isaga oo aan baajin safarkiisa qoyskiisa.
In kasta oo isku dayyadan lagu beddelayo dhaqankaaga xaaladaha isku dhaca, Linus Torvalds dib uma uusan celin oo wuxuu lahaa falcelin markale si adag ka dhanka ah dadka "anti-tallaalka" kuwaas oo ka shaqeeya horumarinta kernel-ka Linux.
Waana Linus Torvalds wuxuu isku dayay inuu tixraaco aragtida shirqoolka wuxuuna xoojiyay doodaha aan u dhigmin matalaad cilmiyeed markii laga hadlayo tallaalka ka dhanka ah COVID 19, marka la eego shirka soo socda ee horumarinta kernel Linux (waxaa markii hore la go'aamiyay in shirka lagu qaban doono khadka tooska ah, sidii sanadkii hore, laakiin suurtagalnimada waxaa loo tixgeliyey in dib loogu noqdo go'aankan dhacdada kororka tirada dadka la tallaalay).
Linus "si edeb leh" ayuu u weydiiyay in faallooyinka inuu ra’yigiisa iska ilaaliyo ("SHUT THE CELL UP"), dadka ha nacasoobin, hana ku soo qaadin been aan jirin oo been abuur ah.
Sida laga soo xigtay Linus, isku dayga lagu faafinayo "beenta doqonimada ah" ee ku saabsan talaalada kaliya waxay muujineysaa kaqeybgalaha kaqeybgale waxbarasho ama u janjeera inuu ka qaato erayga macluumaad been abuur ah oo aan daliil laheyn oo ka imanaya dadka aflagaadada ah oo iyagu aan aqoon waxa ay ka hadlayaan.
Si aan u noqon mid aan sal lahayn, Linus wuxuu si faahfaahsan u muujiyey waa maxay qaladka caadiga ah ee kuwa aaminsan in tallaalka mRNA-ku-saleysan uu beddeli karo DNA-da aadanaha.
Ma ogid waxaad ka hadlayso, ma garanaysid wuxuu yahay mRNA, waxaadna faafineysaa beenta doqonimada ah. Waxaa laga yaabaa inaad u sameyso ogaal la'aan, edeb darro darteed. Waxaa laga yaabaa inaad u sameyneyso maxaa yeelay waxaad la hadashey "khuburo" ama fiidiyowyada YouTube-ka ee khayaanada oo aan aqoon waxa ay ka hadlayaan.
Laakiin nacalad, iyada oo aan loo eegin meesha aad ka heshay macluumaadkaaga khaldan, liis garayn kasta oo ku saabsan Linux ma ogolaanayo in nacasnimadaada nacasnimada ahi ay i dhaafiso iyada oo aan cidina la tartamin.
Tallaalku wuxuu badbaadiyey nolosha macno ahaan tobanaan milyan oo qof.
Kaliya koritaankaaga haddii ay dhacdo inaad runtii diyaar u tahay inaad edeb yeesho - mRNA wax kama beddeleyso isku xigxiga hidde ahaan sinaba. Waa nooc isku mid ah oo dhexdhexaad ah (iyo ku meel gaar ah) ah oo unugyadaadu ay ku dhex abuuraan gudaha markasta oo qayb ka ah geedi socodkooda caadiga ah ee gacanta iyo dhammaan tallaalada mRNA ay sameeyaan waxay ku darayaan qaddar taxane u gaar ah u gaar ah oo markaa ka dhigaya mashiinadooda unugyada caadiga ah inay sameeyaan borotiinka kor u kaca si jirkaagu u barto inuu u aqoonsado.
Waa inaan garwaaqsanno in falcelinta Linus Torvalds aysan sax ahayn, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay dhibic u roon, maadaama sida oo kale uu ixtiraamayo go'aanka dadka kale haddii ay rabaan iyo in kale in la tallaalo, waxa aan ansax ahayn waa markay kuwa kale isku dayaan inay soo galaan shuruudaha dadka kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linus Torvalds ayaa mar kale ku qarxay liisaska dirista, markan waxa uu la jiray tallaalka ka-hortagga
Jawaab ku sii Daniel Eugenio García
Waan ka jiran ahay shikada ka hortaga talaalka, BARO FUDUD !!!! jooji khalkhal abuurka
wuxuu nuugaa qolal dijo
Gacaliyeyaal qaaliga ah: naftaada u hibee kernel-ka Linux. Ha hadlin adigoon ogeyn ... laakiin waxay muujineysaa inuu ka iibiyey wax yaroo dadnimo ah oo uu uga tagay dano madow.
Ku jawaab cabarayaasha chupa
Waxaan bilaabayaa inaan ka dhergo kuwa dhaleeceeya dadka kale inay u fikiraan si ka duwan.
U jawaab Maelo
Riyo jaqayaal qaali ah:
Waxaan kugula talinayaa in aan mar labaad maro jaamacadda kahor. Iyada oo ujeedadu tahay in la xasuusto walxaha aasaasiga ah sida asiidhyada kala duwan ee nucleic iyo shaqadooda.
Google waxay sheeganeysaa in AI ay ka dhakhso badan tahay naqshadeynta qalabka